April 2017 | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
4/30/2017 05:48:00 PM समाचार
राप्रपा संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने
4/30/2017 03:35:00 PM समाचार
काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठकले सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा पछिल्लो पटक ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा संसदीय दलका नेता कमल थापाको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले मुलुकलाई राजनीतिक समाधान दिनका लागि पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक कुन्तीकुमारी शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
पार्टी एकीकरण भएपछि पार्टीेका ३७ सांसद रहेकामा २७ सांसदको मात्र बैठकमा उपस्थिति थियो । रासस
4/30/2017 03:33:00 PM समाचार
काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । नेकपा (एमाले) संसदीय दलको आज बसेको बैठकले संविधान संशोधन विधेयक देश र जनताका लागि उपयुक्त नरहेको जनाउँदै त्यसविरुद्ध लाग्न आफ्ना सम्पूर्ण सांसदलाई निर्देशन दिएको छ ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संविधान संशोधनको कुरा गर्ने सरकारले पुनः आफँैले संविधान संशोधनको प्रस्ताव हालेको शनिबार साँझ मात्र आफूहरुलाई थाहा भएको र त्यसका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको जानकारी पत्रकारहरुलाई दिनुभयो ।
बैठकमा नौदलीय गठबन्धनबीच भएको बैठकका बारेमा पनि सबै सांसदलाई जानकारी गराइएको थियो । रासस
4/30/2017 03:31:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
4/30/2017 03:30:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
4/30/2017 01:33:00 PM खेलकुद
पोखरा, वैशाख १७ गते । पोखरा रङ्गशालाको हातामा नेपालमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पहिलो स्केटिङ ट्रेनिङ सेन्टरको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्केटिङ सङ्घको करिब रु ३० लाखको लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको समितिका क्षेत्रीय अध्यक्ष खगराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । निर्माण सुरु भएको तीन हप्तामै काम सकिएको छ ।
पर्यटकीय नगरी पोखरामा स्केटिङ खेलका खेलाडी उत्पादन गरी अब हुने ओलम्पिक खेलमा नेपालको तर्फबाट स्केटिङ खेलाडीको सहभागिता जनाउने विश्वास गरिएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि अमेरिका, फ्रान्स, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, नर्वे, क्यानाडा, भारतलगायतका ३५ जना विदेशी नागरिकले श्रमदान गरेका थिए ।
यो स्केटिङ खेलको पूर्वाधार दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट मानिएको छ । रासस
4/30/2017 01:19:00 PM समाचार
4/30/2017 01:17:00 PM विचार
4/30/2017 01:14:00 PM समाचार
4/30/2017 01:09:00 PM खेलकुद
4/30/2017 01:06:00 PM खेलकुद
संशोधन प्रस्तावमाथि आजै छलफल हुने, संशोधनमाथि ५० संशोधन दर्ता
4/30/2017 01:03:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
काठमाडौं बैशाख १७ गते । सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराउने प्रयास गरिरहेको संविधान संशोधन विधेयकमा सत्ता गठबन्धन र मधेसी मोर्चाका पाँच सांसदको संयुक्त, एमालेका करिब तीन दर्जन, नेमकिपा र मालेका सबै सांसद र साना दलका सांसदले छुट्टाछुट्टै ५० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संसद्को विधेयक शाखामा संशोधनको समय शनिबार राति साढे दस बजेसम्म यो संख्यामा प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, 'संशोधनका धाराहरू बहुमतले र विधेयक दुईतिहाइ मतले पारित गरिनेछ ।' संसद्को हाल कायम संख्या ५९३ मा विधेयक पारित हुन ३९६ (दुईतिहाइ) मत चाहिन्छ । सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका चीनकाजी श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी, राप्रपाकी कुन्ती शाही, मधेसी मोर्चाका लक्ष्मणलाल कर्ण र जंगीलाल रायले संयुक्त संशोधन राख्नुभएको छ ।एकीकृत विधेयकका रूपमा एमालेका अग्निप्रसाद खरेल, भानुभक्त ढकाल र गोकुल पोखरेल, मालेका आइन्द्रसुन्दर नेम्बाङ, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालकी मीना पुन, मधेस समता पार्टी नेपालका मेघराज नेपाली निषाद र बहुजन पार्टीका बिसेन्द्र पासवानले हस्ताक्षर गरको आठबुँदे संशोधन प्रस्तावलाई एमालेका सांसद रेवतीरमण भण्डारी र गोकुल घर्तीले दर्ता गराएका थिए ।
उहाँले भन्नुभयो, 'सभामुखले त्यसका लागि प्रमुख दलहरू, सरकार र आफ्नै अध्यक्षतामा रहेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट निर्णय लिनुहुनेछ ।'संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलमा प्रस्तावकहरू सबै र संसद्मा त्यस विषयमा बोल्ने चाहने सांसदहरूको संख्या जेजति भए पनि सबैलाई बोल्ने अवसर सभामुखले दिनैपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने खेल भइरहेको विश्लेषण गर्दै संशोधनलाई असफल बनाउन सम्पूर्ण प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको छ ।एमाले स्थायी समितिको शनिबारको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र कांग्रेस नेतासँग भएको छलफलबारे ब्रिफिङ गर्दै भन्नुभयो, 'संविधान संशोधन विधेयक असफल बनाउन सम्पूर्ण प्रत्यत्न गरिनेछ ।'
सरकारले बहुजन पार्टी र मधेस समता पार्टीलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । ती दुई पार्टीले शनिबार संसद्मा विपक्षी मोर्चाका पक्षमा समर्थन जनाएका थिए ।- अन्नपूर्ण बाट चिरञ्जीवी ढुंगाना
स्पष्ट बहुमत नदेखेपछि सरकारले गर्‍यो संसद बैठक स्थगित
4/30/2017 12:57:00 PM समाचार
काठमाडौं बैशाख १७ गते । स्पष्ट बहुमत नदेखेपछि सरकारले संसद बैठक स्थगित गरेको छ । ११ बजेका लागि तय गरेको बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर वैशाख २१ गते बस्नेगरी संसद स्थगित भएको हो ।
सत्तापक्षकै राप्रपाले संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान नगर्ने देखेपछि सरकारले संसद बैठक स्थगित गरेको बताइएको छ । संविधान संशोधनका पक्षमा दुई तिहाई पुर्‍याउन सरकार कसरतमा लागेको छ ।
मधेसी मोर्चासँग गरिएको सहमति अनुसार १७ गते संशोधन दर्ता गर्ने र १८ गते फास्टट्रयाकबाट पारित गर्ने योजना भएपनि २१ गतेका लागि लम्बिएको हो । आजको बैठक सिराहा क्षेत्र नम्बर २ का सा‌ंसद नठुनीसिंह दनुवारको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सकिएको हो ।- अन्नपूर्ण बाट
4/30/2017 12:53:00 PM स्वास्थ्य
फर्निचर उधोगमा आगलागी, १६ लाखको क्षति
4/30/2017 12:49:00 PM पूर्वाञ्चल खबर
सिरहा, बैशाख १७ गते । सिरहा नगरपलिका-१७ बस्ने बेचन यादवले संञ्चालन गरेको महेश फर्निचर उधोगमा आइतबार विहान आगलागी भएको छ। विधुत सर्ट भई अचानक लागेको आगोबाट यादवको महेश फर्निचर उद्योगमा फर्निचर बनाउने अन्य काठपात जलेर नष्ट हुँदा करिब १६ लाख वढिको क्षति भएको संचालक बेचन यादवले बताए । आगलागी प्रहरी, दमकल तथा स्थानीय मानिसहरुको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिएको इलका प्रहरी कर्यालय माडरले जनाएको छ।-पुर्बेलीन्युज बाट
4/30/2017 12:47:00 PM पूर्वाञ्चल खबर
4/30/2017 12:19:00 PM पूर्वाञ्चल खबर
तेह्रथुम, बैशाख १७ गते । तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका–३, मुसाङखेलमा मिलको फित्ताले बेरिएर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । आज बिहान धान कुटाउन मिलमा गएकी ५३ वर्षीया नरमाया पौडेलको सल मिलको फित्तामा अल्झिएपछि बेरिँदा उनी गम्भीर घाइते भएकी थिइन् । उनलाई उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक वासुदेव यादवले जानकारी दिनुभयो ।
पौडेललाई स्थानीयवासी कृष्णबहादुर लिम्बूको कुटानी पिसानी मिलमा फित्ताले बेरेको मृतकका श्रीमान् खम्बबहादुर पौडेलले बताउनुभयो । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । रासस
4/30/2017 12:12:00 PM राजनीति
एमालेले चुनावी घोषणापत्र सार्बजनिक गर्दै
4/30/2017 12:10:00 PM राजनीति
काठमाडौं, वैशाख १७ गते । नेकपा एमालेले स्थानीय चुनावको घोषणापत्र आज सार्बजनिक गर्दैछ । दिउँसो ३ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने एमालेले जनाएको छ ।
एमालेको घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र ५ हजार अमेरिकी डलर आम्दानी हुने गरी आर्थिक स्रोतहरू परिचालित गर्ने, तीन वर्षभित्र गरिबी समाप्त पार्ने, एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, वृद्धभत्ता बढाएर पाँच हजार पुर्‍याउने लगायतका विषय उल्लेख छन् ।
यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी, आवास, खेलकुद, मनोरञ्जनजस्ता मानवीय आवश्यकताका आधारभूत कुराहरू सबै निःशुल्क गराउने एमालेले जनाएको छ ।
घोषणापत्रसँगै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका उम्मेदवारहरु पनि सार्बजनिक गर्ने एमालेको तयारी छ । स्थानीय तह निर्वाचनका ९० प्रतिशत उम्मेदवारको टुंगो लगाइसकेको एमाले सचिव योगेश भट्टराईले बताए ।-अनलाइनखबर
4/29/2017 06:53:00 PM विचार
4/29/2017 06:39:00 PM समाचार
परिश्रमको गाढा रङ
4/29/2017 06:15:00 PM कला /साहित्य
“ओ दाइ ! स्नेहा होटल जाने हो ?”
“अहँ, त्यति टाढा त जान्नँ ।”
“ए, ल त ।”
एउटा रिक्साले न्युरोडबाट स्नेहा होटल जान नमानेपछि अर्काे रिक्सा कुर्नुको विकल्प थिएन ।
घाम पनि आफ्नो घर फर्किसकेको बेला थियो । घडीले साढे सात बजाउने सुरसार कस्दै थियो । भोकले पेटभित्रका आन्द्रा निमोठिएर च्यातिनै थालेका थिए । हामी तीन जना थियौँ । होटलसम्म पुग्ने लमतन्न सडक ढसमस्स थियो हाम्रा अघिल्तिर ।
त्यही सडकको छातीमाथि धामिन सर्पझैँ परबाट घस्रिँदै एउटा रिक्सा आएको देख्यौँ । केही मिटर परै थियो ऊ । हात दिएर रोक्न खोजेँ मैले ।
मसिनो धर्को मोटो, मोटो, मोटो हुँदै हाम्रो अघिल्तिर सिंगो रिक्सा भएर ठिंग उभियो । आकाशमा टल्किन थालेको जूनको छाया हाम्रो अनुहारमा प¥यो । तर, आकाशबाट विदा मागेर सूर्य जाँदाको आकाशझैँ गोधूली रङ पोतिएको अनुहारसहित रिक्सा चलाइरहेको भाइ मुस्कुराउन खोज्यो ।
मेरो मुखबाट फुत्तै निस्कियो, “आम्मा कति सानो भाइ !”
उमेरले उसलाई फिक्का देखाए पनि परिश्रमले उसको जीवनको रङ गाढा बनाएको हुँदो हो नि । यस्तो सोचेँ । परिश्रमको रङ कति गाढा हुँदो रहेछ !
त्यो सानो भाइ, मुसुक्क हाँस्यो । थाकेर चूर भएको उसको अनुहारले बताउँथ्यो । तरपनि, हाँस्दा ऊ एक्कैछिन उज्यालियो । जस्तो बिजुली चम्कँदा आकाश उज्यालिन्छ । उज्यालो अनुहारमा मीठो हाँसो बेस्सरी सुहायो । हाँसेको त कसलाई सुहाउँदैन र ! देख्दा त त्यस्तै कलिलो थियो ऊ । तर, लाग्थ्यो जिम्मेवारीको सगरमाथाले उसलाई ‘बाउन्ने’ बनाइरहेको छ ।
“भाइ जाने हो स्नेहा होटल ?”
“जति दिए नि दिनु न ।” उसले आफ्नो श्रमको मूल्य तोकेन । हामी गह्रुँगो भयौँ ।
“भन न” साथीले जिद्दी ग¥यो ।
“हैन जति दिए नि हुन्छ । ४० दिनु न ।”
उसले ४० भनेपछि लाग्यो उसलाई अझै नेपालगञ्जको रिक्साको भाडादर थाहा छैन । नत्र हामी जहाँ थियाँै, त्यहाँबाट स्नेहा होटल पुग्न ५० रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति लाग्छ, कम्तिमा पनि ।
हाम्रो जिद्दीपछि त्यो सानो भाइले आफ्नो श्रमको मूल्य लगाएको देख्दा भनन रिँगटा छुटिसकेको थियो मलाई ।
ठीक त्यही बेला कलंकीमा बल्छी थापेर बस्ने ट्याक्सी ड्राइभरहरूको अनुहार सम्झिएँ ।
हामी तीनै जना रिक्सामा चढ्यौँ । वर्षांैै रिक्सा चलाएको मान्छेजस्तो पाको ऊ । जिम्मेवारीले मान्छेलाई कसरी परिवर्तन गरिदिन्छ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण त्यही सानो भाइ थियो । उसले आफ्नो जिम्मेवारीको भारसहित हाम्रो भारलाई लमतन्न सडकमाथि घसारिरहेको थियो ।
खाल्डाखुल्डी मज्जाले छल्दै हिँड्न थाल्यो रिक्सा । मलाई लाग्यो, जीवनका असन्तुष्टि, अफ्ठ्यारा र हण्डरहरू यो सानो बालकले यसैगरी छल्दै हिँडेको छ कि छैन होला ? केही मिनेटको बाटो पार गरिरहँदा मेरा मनमा हजारौँ तर्कनाहरू सुट्ट सुट्ट आऊजाऊ गरिरहे ।
ओर्लिने बेला सोधेँ, “बाबु एकछिन कुर्छौ ? हामी खाना खाएर अघिकै ठाँउमा फर्किन्छाँै ।”
ऊ मुसुक्क हाँस्यो । दाहिने हातको चोर औँलालाई कुप्री पार्दै निधारतर्फ बढायो । र, निधारमा छुटेको पसिनाको मूललाई त्यही औँलाले सर्लक्क पा¥यो । श्रमको मोती–दाना चिल्लो सडकमा तप्प खस्यो । अनि भन्यो, “हुन्छ ।”
“खाना खायौ ?” होटलतर्फ जानुअघि उसलाई सोध्यौँ, “नखाएको भए जाउँ ।”
उसले मानेन । घरै गएर खान्छु भन्यो । अनि, उसलाई कुर्न आग्रह गरेर हामी केही बेरलाई हिँड्यौँ ।
खाना खाइञ्जेल पनि मेरो दिमागमा त्यही रिक्साचालक भाइका बारेमा कुरा खेलिरह्यो । उसकै अनुहार दिमागमा नाचिराख्यो ।
ऊसँग केही कुरा गर्न, केही सोध्न मन लाग्यो ।
हतार हतार खाना खाइसकेर ऊ भएको ठाउँमा पुगेँ । हातको टेको बनाएर ऊ झकाइरहेको थियो ।
कुरा गर्ने मेसो मिलाउन खोज्दै थिएँ । के सोध्ने सुरुमा जस्तो लागिरहेको थियो । त्यसैले “कुर्नु प¥यो है भाइ” भन्दै कुरा सुरु गरेँ ।
सजिलो उत्तर आयो ऊबाट, “नाइँ नाइँ । ठीक छ ।”
“भाइकोे नाम के हो नि ?” कुराको पोायो फुकाएँ मैले नै ।
“देवजंग शाही ।”
“कति वर्ष भयौ ?”
“कालिकोट, मान्मा बजारदेखि अलि भित्र गाउँमा ।”
“यहाँ को को बस्छौँ ?”
“आमा, दुई जना भाइ, एउटा बहिनी र म ।”
“अनि बुवा ?”
“कहाँ जानु भएको ?”
“खै थाहा छैन ।”
यो उत्तरले म चिरिएँ । कहिलेकाहीँ नगरे पनि हुने कुरा गरिदिन्छ मान्छे, नभए पनि हुने घटना घटिदिन्छ जीवनमा । सबैथोक घटना हो । कोहीकसैलाई भने सिंगो जिन्दगी नै दुर्घटना भइदिन्छ ।
केहीबेर मौन बस्यौँ हामी । मौनताले चिरेपनि मनभित्र प्रश्नहरूको कारखाना तैयार थियो । एकछिनको मौनतालाई भंग गर्दै फेरि सोधेँ ।
“अनि आमाले बुवाको बारेमा केही भन्नु हुन्न त ?”
यति भनेर ऊ एकछिनसम्म ओठ टोक्दै यताउता ग¥यो । बाटोको मधूरो बत्तिमा मैले उसको अनुहार नियाल्न खोजेँ । ऊ केही बोल्न खोज्दै थियो, केही भन्न खोज्दै थियो, म उसको कुरा सुन्न पाउने हतारोमा थिएँ ।
“कालिकोटमा घर त छ तर अन्नपात केही पनि उब्जनी हुन्न, त्यही भएर हामी नेपालगञ्ज आइम् ।” देवजंग विस्तारै खुल्न थाले, “मामा हुनुहुन्छ उहाँले नै कोठा खोज्दिनु भयो, ग्यास चामल सबै किन्दिनु भयो, त्यही मामाको अटो रिक्सा थियो, मामाले नै मलाई रिक्सा सिक्छौ र भनेपछि मैले हुन्छ भने, अनि रिक्सा सिकेर चलाउन थालेँ ।”
“अनि सोधेँ कति महिना भयो रिक्सा चलाउन थालेको ?” सोधेँ ।
“सात महिना ।”
“तिमी त एकदमै सानो छौ, १४ वर्षको मान्छे, यति सानो मान्छेले यसरी रिक्सा चलाउँदा पुलिसले समाउँदैन ?”
“अहँ समाउँदैन, केही भन्दैन ।” ऊ ढुक्क सुनिन्थ्यो ।
उसको कन्फिडेन्स न्युरोडबाट रिक्सा चढेपछि नै प्रस्ट देखेकी थिएँ मैले । किनभने, ऊ मज्जाले रिक्सा चलाइरहेको थियो, खाल्डाखुल्डी याद गर्दै, मान्छेलाई बाटो दिँदै, ठूला गाडी आए आफू साइड लाग्दै निर्धक्क रिक्सा हाँकिरहेको थियो ।
ऊ एउटा जिम्मेवार रिक्सा चालक मात्रै नभएर आमा, भाइ र बहिनीको एउटा जिम्मेवार अभिभावक पनि थियो । एक वर्षअगाडि नेपालगञ्ज आएको ऊ, नेपालगञ्जकै सल्यानी टोलमा महिनाको दुई हजार भाडा तिरेर कोठा लिएर भाइ बहिनी र आमासँग बस्छ ।
ऊ त्यहीँकै एउटा सरकारी स्कुलमा कक्षा आठमा पढ्दैछ, त्यति मात्रै होइन, भाइबहिनीलाई क्रमशः ५, ३, २ मा र अब यही वर्ष अर्काेलाई एक कक्षामा भर्ना गराउने हो, त्यसको पनि पढ्ने बेला भयो भन्दैछ ।
आठ कक्षामा पढ्ने त्यो १४ वर्षे देवजंगसँग जति कुरा गर्दै गयो, त्यति नै अचम्म लाग्दै थियो मलाई । नेपालगञ्जको गर्मीमा बिहान स्कुल जान्छ, दिउँसो एकछिन पढ्छ, भाइबहिनीसँग खेल्छ अनि बेलुका रिक्सा चलाउँछ । एकदिनमा अझ भनाँै, साँझ रिक्सा चलाएर, पाँच सात सय कमाउँछ । अनि मालिक (उसको मामा)लाई दिनको दुई सय रुपियाँ दिनुपर्छ, रिक्सा चार्ज गरेबापत ।
घरि–घरि ऊ मलाई पुलुक्क हेथ्र्यो, अनि मुसुक्क हाँस्थ्यो, बाटोमा बालेका बत्तिको उज्यालोमा ऊ अझै चम्केजस्तो लाग्थ्यो मलाई । तर, उसको भविष्य ? तिनै बत्ति निभ्दाको अवस्था सम्झिएँ मैले ।
हामीसँगै जानु भएको दाइ खाना खाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उसलाई भुलाउनु पनि थियो मैले ।
तर फेरि उसलाई हतार पो छ कि भनेर घरि–घरि “अबेर त भएन नि तिमीलाई ?” भनेर सोध्थेँ, ऊ मुसुक्क हाँस्दै “हैन छैन ।” भन्थ्यो ।
ऊ एकछिन मौन भयो, मतिर फर्केर बसेको ऊ रिक्साको अगाडि फर्कियो, अनि खै के के नबुझिने गरी गुनगुनाउन थाल्यो । त्यो रोमान्टिक गीत थियो । कष्टपूर्ण जीवन बाँचिरहेको एउटा बालक जो नवयुवक बन्ने तरखरमा छ, उसले गाइरहेको गीतले सायद उसलाई जीवन बाँच्ने कला सिकाउँथ्यो ।
घरि–घरि पुलुक्क मलाई हेरेर मुसुक्क हाँस्ने उसलाई हेरेर म उसको अनुहार नियाल्ने प्रयत्न गर्थेँ । अनि सोच्थँे, १४ वर्षको उमेर परिवारको सारा जिम्मेवारी उठाएको छ, केही सुख पाइन्छ कि, दुई छाक मीठो–मसिनो खान पाइन्छ कि भन्ने आसमा जन्मथलो (कालिकोट) छोडेर हिँडेको छ । यति ठूलो कदम चाल्न उसलाई ठूलै हिम्मत र साहस चाहियो होला, तर त्यो हिम्मत र साहस ती साना भाइबहिनीले पक्कै दिएनन्, ती आमा जो केही गर्न सक्दिनन् उनले पनि कसरी दिइन् होला र ? गरिबी, एकछाक खान पाउने सपनाले नै दियो र उठायो होला उसले यति ठूलो कदम । र, आइपुग्यो कालिकोटबाट नेपालगञ्जसम्म ।
जिन्दगी त सपनाहररूले लखेटी लखेटी धानिन सिकाउने एउटा तन्द्राजस्तो ।
हुन त ऊ नेपालगञ्ज आउनुभन्दा पहिले इन्डिया पनि गयो, त्यहाँ पनि केही समय काम गरेर १४ हजार रुपियाँ कमाएर ल्यायो । तर, उसलाई फेरि फर्केर इन्डिया जान मन लागेन । र, परिवार सबैलाई लिएर आयो नेपालगञ्ज ।
कस्तो ठूलो साहस ! जिन्दगीप्रति कस्तो ऊर्जावान् !
“भविष्यमा के भन्ने मन छ ?” प्रश्नको अर्को पोयो फुकाएँ ।
“भगवान्ले जे बनाउँछन् त्यही बन्ने हो । जे बनाउँछन् त्यसमै खुसी हुन्छु म ।” लाग्यो ऊभित्र एउटा दार्शनिक छ, त्यसैको आवाज उसको मनको बाटो हुँदै निस्किरहेको छ ।
“तिमीसँग मोबाइल फोन छ ?” मैले अर्को प्रश्न सोधेँ । मेरा प्रश्नहरूको कुनै रेखाचित्र थिएनन् । म खलबलिएको थिएँ, उसको अवस्था देखेर । अनि प्रश्नहरू मनबाट निस्किरहेका थिए, फुत्त फुत्त । मैलाई नसोधी ।
“किन ? बोक्न मन लाग्दैन ?” सोधेँ ?
“अहिले नै किन बोक्नु मोबाइल ? सबै ध्यान जति मोबाइलमा जान्छ, पढाइमा जाँदैन । म बिग्रिन चाहन्न ।” विष्फोटक लाग्यो उसको जवाफ ।
छक्क परेँ म । उसको कुरा गर्ने तरिका किन किन भिन्न लागिरहेको थियो मलाई ।
अन्ततः । हामी फर्किने समय आयो । उसको रिक्साले सुइँय गर्दै गन्तव्य ताक्यो । हामी हिँड्यौँ ।
बाटोभरी सबै जना चुपचाप थियौँ, मेरो मनमा उसका कुराले उथलपुथल पारिरहेको थियो ।
हामी न्युरोड पुग्यौँ ।
ओर्लिने बेला उसले भनेको भन्दा केही बढी पैसा दियौँ । उसलाई विदा गर्दै मैले भनेँ, “बाबु राम्रोसँग पढ, पढाइमा ध्यान देऊ है ।”
ऊ मुसुक्क हाँस्यो ।
4/29/2017 06:10:00 PM समाचार
जुम्ला , वैशाख १६ गते । तातोपानी गाउँपालिका–२ स्थित हिमशिखर माविमा अध्ययनरत छात्रामा एक महिनादेखि मास ‘हिस्टेरिया’ रोगको समस्या बढ्दै गएको छ ।
चैत १३ गतेदेखि ८, ९ र १० कक्षाका छात्रामा यो समस्या देखिएको हो । यो समस्या भएको दुई÷तीन दिनभित्र स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीले उपचार गरे तर कुनै पत्तो नलागेको निमित्त प्रधानाध्यापक राजु केसीले जानकारी दिए ।
“त्यसको लगत्तै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाको समन्वयमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका डाक्टर सुवेश चौधरी नेतृत्वको टोली औषधि सामग्री लिएर त्यहाँ पुग्यो र उपचार सेवा सुरु गर्यो तर उपचार सेवा अवधिमा अभिभावकको चासो रहेन” प्रधानाध्यापक केसीले भने।
चैत १३ गते लाइनमा प्रार्थना गर्ने समयमा कक्षा– ८ मा अध्ययनरत हिरा डाँगीबाट चिच्याउने, कराउने, रुने काम्ने, तर्सने रोग अहिले ६० जना भन्दा बढीमा देखिएको उहाँले बताए । उनी भन्छन्, “यो रोग देखिएबाट छात्राहरुको हात खुट्टा दुख्ने, गल्ने, झमझमाउने, लाटोपन देखिने, पेट दुख्ने र त्यसपछि ढल्ने क्रियाकलाप देखिन्छ ।” उनका अनुसार छात्राहरुको रोगको निदानका लागि अभिभावकले स्थानीय विधि धामीझाँक्री गरिरहेका छन् तर रोग दोहिरिरहेको छ ।
प्रधानाध्यापक केसीकाअनुसार लामो समयसम्म लम्बिएको यो रोगका कारण विद्यालय पठनपाठनको वातावरण प्रतिकुल बन्दै गएको छ । रासस
निर्वाचन आयोगले भन्यो–निर्वाचनको बीचमा बजेट नल्याउनू
4/29/2017 05:55:00 PM समाचार
काठमाडौं , वैशाख १६ गते । निर्वाचन आयोगले दुईवटा निर्वाचनको बीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
आयोगको निर्णयमा भनिएको छ– “एक महिनाको अन्तरालमा हुने दुई चरणका निर्वाचनका बीच सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता अनुकूल नहुने भएकाले सरकारले प्रस्तुत गर्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटटले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने देखिएको हुँदा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने ।”
सरकारको निर्णयअनुसार यही वैशाख ३१ गते पहिलो र जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति घोषणा भई निर्वाचनका कार्यक्रमहरुसमेत सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
आयोगले २०७३ फागुन १८ गतेदेखि लागु हुने गरी स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिचा लागु गरेको र सो आचारसंहिता दोस्रो चरणको निर्वाचन अवधिभर समेत यथावत कायम रहने हुँदा दुवै निर्वाचनको बीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा निर्वाचन आचार संहिचा अनुकूल नहुने आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।
4/29/2017 02:52:00 PM समाचार
4/29/2017 02:02:00 PM स्वास्थ्य
डा. राजेन्द्रकुमार गिरी प्रबन्ध निर्देशक, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति
आयुर्वेदिक औषधि भन्दैमा जथाभावी प्रयोग गर्न हुँदैन ।
उत्पादन मिति नभएका तथा औषधि कम्बिनेसन नखुलाइएका आयुर्वेदिक औषधि खानु हुँदैन ।
कतिपय आयुर्वेदिक औषधि विषाक्त जडीबुटीबाट बनाइएका हुन्छन् । त्यसकारण चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र त्यस्ता औषधि सेवन गर्नुपर्छ ।
सरकारबाट मान्यताप्राप्त औषधि उत्पादन कम्पनीबाट उत्पादित औषधि मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।
कतिपय एलोपेथिक औषधि निरन्तर सेवन गरिरहनुपर्ने हुन्छ । तर, हर्बल प्रयोग गर्दा एलोपेथिक औषधि छोडेको पाइन्छ । त्यस्तो गर्न हुँदैन । छोड्नुपरेमा चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र छोड्नुपर्छ ।
कतिपय आयुर्वेदिक औषधिले पनि शरीरका अंगहरूलाई असर गर्दछ । त्यसकारण औषधि सेवन गर्ने या नगर्नेबारे चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ ।-
4/29/2017 01:58:00 PM समाचार
4/29/2017 01:50:00 PM खेलकुद
4/29/2017 01:45:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
4/29/2017 01:23:00 PM समाचार
4/29/2017 01:20:00 PM फोटो समाचार
नेपाल आउने अधिकांश विदेशी पर्यटकहरुले खासगरी सगरमाथा, अन्नपूर्ण र लाङटाङ क्षेत्रको पदमार्ग रोज्ने गरेका छन् । अन्य पदमार्गको आवश्यक चर्चा र प्रचार नहुनु यसको मुख्य कारण हो । पछिल्लो समय भने डोल्पा-कागबेनी पदमार्गमा पनि पर्यटकको रुचि बढ्न थालेको छ । वर्षमा एक सयको हाराहारीमा पर्यटकहरु सो पदमार्गमा जान थाल्नुलाई राम्रो सुरुवात मान्नुपर्छ ।